I-China N95 i-Mask abavelisi kunye nabaxhasi | UTianli
1. Ilaphu le Meltblown lisebenzisa i-polypropylene njengeyona nto iphambili eluhlaza, kwaye idayamitha yodibaniso inokufikelela kwi-microns eyi-0.5-10. Ilaphu leMeltblown linokucoca umoya okuhle kwaye sisixhobo esihle semaski.
2. Yenziwe ngezinto ezininzi ezingenasiphene, ezingadibaniyo, izinto ezingashukumisiyo.
3. Guqula u-bandage strip kunye ne-foam cushion eyakhelwe-ngaphakathi ukuze ikwazi ukulungelelanisa imilo eyahlukeneyo yobuso ngokutywina okukhululekileyo.
4. Iimaski ezichithayo, ezingacocekanga kwaye zilungele ukusetyenziswa.
I-Q1: Ngaba unayo imaski yobuso kwisitokhwe?
A: Uxolo, akukho maski esitokhweni ngoku.Umzi mveliso wethu ucwangcisiwe ukuveliswa kwemiyalelo yethu kubathengi bethu kwihlabathi liphela, iimaski zilungiselelwe ukuthunyelwa kubathengi abagunyazisiweyo.
I-Q2: Ndingakwazi ukubeka i-mask yomyalelo wobuso ngoku?
Impendulo: Ewe, unako. Umzi mveliso wethu ungomnye wabenzi abakhethiweyo ukunceda urhulumente avelise imaski, ngoko ke imveliso yethu khange iyeke ukusukela kwangoko.Ukuba nje ilungisiwe iodolo yakho, ukuhanjiswa kuya kucwangciswa ngolungelelwano.
I-Q3: Ngaba unazo izatifikethi?
A: Sine-CE, FDA, kunye neelayisenisi zentengiso yekhaya.
Edlulileyo: 2 Ply Mask
Okulandelayo: FFP3 Ubuso bemaski